'भीमदत्तलाई देशकै उत्कृष्ट नगर बनाउँछौं'
१८६५ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ जेष्ठ २५ , १०:१२ बजे
– गोपाल रसाइली
(नगर प्रमुख पदका उम्मेदवार)
भीमदत्त नगरपालिका, नेकपा माओवादी केन्द्र
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरू प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन् । कञ्चनपुर सदरमुकाम भीमदत्त नगरपालिकामा पनि चुनावले रौनकता छाएको छ । दलका उम्मेदवार घरदैलो अभियानमा सक्रिय हुँदै आ–आफ्ना चुनावी एजेण्डा राखिरहेका छन् । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि भीमदत्त नगरपालिकामा उम्मेदवारको टुंगो लगाइसकेको छ । माओवादी केन्द्रले भीमदत्तको मेयरको उम्मेदवारमा जिल्ला इन्चार्ज गोपाल रसाइलीलाई अघि सारेको छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मेयरका उम्मेदवार गोपाल रसाइलीसँग पत्रकार जनकसिंह विष्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कस्तो छ चुनावको तयारी ?
– चुनावको तयारी राम्रै छ । पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकता आ–आफ्नो ठाउँबाट खटिरहेका छन् । सबै साथीको मेहनत हेर्दा हाम्रो जित हुन्छ ।
घरदैलोमा मतदाताको अपेक्षा के पाउनुभयो ?
– हामी जेठ १४ गतेबाट नै घरदैलो अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं । मतदातासँग भेटघाटको कार्यक्रम पनि जारी नै राखेका छौं । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा मतदाताले माओवादी केन्द्रलाई माया गरेका छन् । माओवादी केन्द्रको एजेन्डा, कार्यक्रमलाई माया गरेका छन् । जनताले मन पराएजस्तै सुझाव दिएका छन् । कतिपय ठाउँका शुभचिन्तकले तपाई जित्नु हुन्छ भनेका छन् । जनताको सुझावप्रति सकारात्मक रहेको छु । जनतामा आशा पलाएको छ । माओवादी पार्टीले केही गर्छ भन्ने जनतामा उत्साह पाएका छौं ।
तपाईका एजेण्डा के–के हुन् ?
– स्थानीय तहलाई व्यवस्थित गर्ने, सिंहदरवारको अधिकारलाई गाउँघरमा पुर्‍याउने एजेण्डा हो । गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि जनता मौलिक हकअधिकार सिंहदरवारबाट जनताको घरदैलोसम्म ल्याउनु हाम्रो एजेण्डा हो । विकास निर्माण मुख्य एजेण्डा हो । देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, देशमा रहेको बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने र कृषिमा आधुनिकीकरण ल्याउने लगायतका थुप्रै एजेण्डा जनताका बीचमा लगेका छौं । ती एजेण्डा जनताको पक्षमा समेत रहेका छन् ।
भीमदत्तको विकास तथा जनताको लागि के छन् तपाईका एजेण्डा ?
– भीमदत्त नगरपालिकामा रहेको बाढीपहिरोको समस्यालाई न्यूनिकरण गर्छाैं । खानेपानीको समस्या, विद्युत्, स्वास्थ्य सेवाको समस्या, टेलिफोनका समस्यालाई पनि समाधान गर्छाैं । भीमदत्त नगरपालिकामा रहेको प्रमुख समस्या सडक सञ्जालको रहेको छ । जसलाई सबै सडक सञ्जाल विस्तार तथा कालोपत्रे गर्ने, सडकको दायाँबायाँपट्टि वृक्षरोपण गर्ने, सौर्य सडक र उर्जाको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका एजेण्डा लिएर हामी जनताको बीचमा गएका छौं । भीमदत्तलाई देशकै उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउन सक्ने हाम्रो ध्यय रहेको छ ।
मेरो पहिलो दीर्घकालीन योजना सडक सञ्जाल विस्तार, सडक कालोपत्रे विस्तार गर्ने हो । भीमदत्तमा स्वास्थ्यका समस्या छन् । ती समस्या समाधान गर्ने मसँग धेरै योजना रहेका छन् । भीमदत्त नगरपालिकामा धेरै ठाउँमा खानेपानीको समस्या रहेका छन् । त्यसको व्यवस्थापन गर्ने पनि प्लान बनाएको छु ।
आर्सेनिकयुक्त पानीलाई हाइटेन्कमार्फत् उचित व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । राष्ट्रिय वनको आसपासमा बसोबास गर्ने जनताले कुनै पनि सेवासुविधा पाएको छैनन् । स्थानीयलाई जंगली जनावरले सताउने गरेको छ । त्यहाँ बसोबास गर्ने जनतालाई राष्ट्रिय वनबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय वनको आसपास बसोबास गर्ने जनताका पीडा थुप्रै छन् भन्ने भन्दा पनि राष्ट्रिय वनको नजिक बसोबास गर्न पाए जीवनस्तर सुधार हुन्छ भन्ने कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ।
खोला, नदीलाई वैज्ञानिक रुपमा व्यवस्थापन गरी त्यसको जोखिम हटाउने छु भने शिक्षाको गुणस्तरलाई माथि उकास्न निःशुल्क रुपमा पढाईको व्यवस्था गरिने छ ।
तपाईले चुनावमा जित्ने आधार के छन् ?
– म चुनाव जित्छु भन्ने आशा लिएको छु । जनताले मलाई जिताउनु हुन्छ भन्ने पूर्ण आशा छ । आधारको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय राजनीति पनि हो । अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यकालमा भएको आर्थिक वृद्धिदर, समाज विकास, सामाजिक रुपान्तरण आधार हो । मुलुक अहिले आर्थिक क्रान्तितर्फ उन्मूख छ । हामीसँग भएका एजेण्डा अन्य दलसँग छैन । जनताले हाम्रो पार्टीको एजेण्डा बुझेका छन् ।
यसअघि के काम गर्नुभएको छ र तपाईलाई मतदान गर्ने ?
– म यसअघि सार्वजनिक पदमा बसेको छैन । त्यही भएर काम गर्ने अवसर पाएको थिएन । अब जनताले काम गर्ने अवसर दिनेछन् भन्ने अपेक्षा लिएको छु । २०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा हामी युद्ध अभियानमा थियौं । त्यसैले पनि सेवा गर्ने अवसर पाएको छैन । अहिलेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका समस्या भीमदत्त नगरको मात्र नभई देशभरि नै समस्या रहेको छ । यी समस्या समाधानका लागि स्थानीयका नेतादेखि केन्द्रका नेताको मनमा उब्जिएका छन् । कृषिमा परनिर्भर भएका छांै । त्यसकारण बेरोजगारीको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने छु । युवालाई प्रशिक्षण दिएर दक्ष बनाएर परिचालन गर्ने योजना छ ।
जिल्ला इन्चार्ज नै उम्मेदवार ! सबैतिर आफैं जाउँ भनेर हो ?
– भीमदत्तको मेयरको उम्मेदवारका लागि ७ जना आकांक्षी थियौं । सबैले छलफल गर्‍यौ । सबै साथीहरूले गोपाल रसाइलीसँग अनुभव छ । केही गर्न सक्ने मान्छे भनेर सहयोग गर्नुभएको हो । उहाँ (रसाइली) लाई नै अगाडि सार्दा भीमदत्त नगरपालिकामा हामीसँग जित्न सक्ने आधार छ भनेर साथीहरूको राय आएको हो । म दलित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे, त्यही भएर पनि सहयोग गर्नुभएको हो ।
तपाईप्रति असन्तुष्ट पनि छन् नि ?
– कोही साथी पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्न । हामी ६–७ जना साथी र पार्टीबीच भएको निर्णयको पत्र सबैसँग पुग्नमा ढिलाइ भएको हो । त्यसो हँुदा केही साथीलाई अन्यौल भएको हुन सक्छ । तर, असन्तुष्टि भने छैन । त्यसकारण पार्टीभित्र खेल्नु हुँदैन । हाम्रो पार्टीभित्र एकदमै घनिष्ठता छ ।
व्यक्तिगत रुपमा तपाईलाई किन मत दिने ?
– म एउटा युवा हुँ । २० औं वर्ष राजीतिक आन्दोलनमा होमिएको मान्छे हुँ । एउटा निम्न परिवारबाट अगाडि बढेको मान्छे हुँ । जो तल्लो वर्गका लक्षित वर्ग छन्, ती समुदायका दुःखपीडा, कष्ट जति गोपाल रसाइलीले बुझेको छ । त्यति अरुले बुझेका छैनन् होला । राजनीति गर्नेले सबै जातजाति, धर्म संस्कृति बुझेको हुन्छ । तर, जति मैले बुझेको छु त्यति अरुले बुझेका छैनन् ।
– अहिले हामी मुख्य प्रतिस्पर्धीको रुपमा ३ दल रहेका छौं । हामीसँग मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस नै हो । कांग्रेस पुरानो पार्टी भएकाले मुख्य प्रतिस्पर्धी भएपनि हामी नै पहिलो नम्बरमा आउँछांै । प्रतिस्पर्धी पार्टीको काम कारवाही हेर्दा हामी नै अगाडि छौं जस्तो लागेको छ ।
नगर विकास समितिको घडेरी प्रकरणमा तपाई पनि मुछिनुभएको हो नि ?
– महेन्द्रनगर नगर विकास समिति भनेको भीमदत्त नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्ने हो । त्योसँग भएको जमिन बेच्ने र त्यो बेचेर भीमदत्त नगरभित्र विकास गर्ने काम गरिनुपर्छ । त्यसले आफूसँग भएको जमिनलाई प्लटिङ गर्ने, जनतालाई सुलभ मूल्यमा बिक्री गर्ने, सटर बनाएर भाडामा दिने गर्छ । त्योबाट आएको बजेटबाट नगरभित्र सडक बनाउने, ढल निकास बनाउने, ग्रीन पार्क निर्माण गर्ने लगायतका काम गर्ने गर्छ । म पनि २०६८ सालमा महेन्द्रनगर नगर विकास र भीमदत्त नगरपालिकामा गए । मैले त्यहाँ १ महिना काम गर्ने मौका पाए । त्यसपछि आन्दोलन भयो कामै हुन सकेन । त्यो समयमा सहरका गल्ली निर्माण गर्ने कार्य गर्‍यांै । महेन्द्रनगरको वरिपरि सौन्दर्य नदेखिने भएपछि व्यवस्थापनको लागि समितिले सहमति गरेर जमिन लिजको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्‍यौं । निर्णय गर्ने क्रममा आन्दोलन भएपछि त्यतिकै रोकियो । केहीले निवेदन दिएर भौतिक निर्माण पनि गरे । तर, ती पूर्वाधार नगर विकास समितिको योजना अनुसार बनाउन भन्यौं । मैले जनताका लागि गरेको छु ।
मेयरम निर्वाचित भएपछि सबैभन्दा पहिले के काम गर्नुहुन्छ ?
– मैले चुनाव जिते भने सबैभन्दा पहिले सडक सञ्जाल विस्तार गरेर गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउने छु । शिक्षामा सुधार गरी सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, खानयोग्य पानी खोजी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, बेरोजगार समस्या समाधान गर्नका लागि भीमदत्त नगरपालिकालाई औद्योगिक क्षेत्र बनाई समस्या समाधान गर्ने छु ।